Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan birta naxaasta ah | Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada
Copper waa bir kala-guur ah oo ku dhex jirta unugga 29-aad, koox IB dhexdeeda ah oo ku jirta miiska nidaamka xilliyadeed. Copper waxaa loo yaqaanaa macdanta warshadaha sababta oo ah ductilitykeeda sare, marinka hawada, kuleylka kuleylka, kuleylka kudhaqanka wanaagsan iyo iska caabbinta daxalka. Ka sokow, waa nafaqo muhiim u ah cuntadeena maalinlaha ah iyo naxaasku wuxuu kaloo leeyahay astaamo lidka bakteeriyada, sidaas darteed naxaasta ayaa xitaa ka sii muhiimsan ka hortagga infekshinka. Waa kuwan 10 xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan naxaasta - birta saddexaad ka dib birta iyo aluminium ee adduunka laga isticmaalo.
Mawqifka naxaasta ee miiska nidaamka xilliyada
10 Xaqiiqooyin Xiiso Leh oo Ku saabsan Copper
1. Magaca naxaasta waxaa bixiyay Roomaan, waxay u bixiyeen "aes cyprium" oo macnaheedu yahay "bir ka timi Qubrus" maxaa yeelay naxaastii tirada badnayd ee waagaas la isticmaali jiray waxaa lagu qoday Qubrus.
2. Masaarida waxay adeegsadeen astaanta Ankh si ay ugu muujiyaan naxaas nidaamkooda hieroglyphic. Waxay sidoo kale u taagan tahay nolosha weligeed ah. Khubarada cilmiga dhulka waxay soo wariyeen in tuubooyin naxaas ah ay markii ugu horreysay adeegsadeen Masaaridii hore si ay ugu hagaan biyaha qiyaastii 2750 dhalashadii Masiixiga
3. Ma ogtahay in Taallada Xorriyadda ee New York ay ka samaysan tahay in ka badan 80 tan oo naxaas ah oo laga sameeyay macdanta 'Visnes Copper Mine' ee Norway. Taallada Xorriyadda waxaa farsameeyay farsamayaqaanno Faransiis ah, waxay soo martay safar dheer oo ka yimid Faransiiska illaa Ameerika waxayna iska caabisay hawada badda cusbada leh. Xajmiga cagaaran ee dabiiciga ah ee Lady ayaa ka ilaaliyay daxalka tan iyo 1886.
Taallada Xorriyadda waxaa laga sameeyay in ka badan 80 tan oo naxaas ah
4. Naxaasku waa birta kaliya ee casaanka ah ee ka kooban dhammaan canaasiirta. Ku darista naxaasta dahabku waa sida dahabka ama dahabka dahabka ahi u daatay.
Copper waa birta kaliya ee casaanka ah ee ka kooban dhammaan walxaha
5. Naxaasku waa birta ugu da'da weyn aadanaha ee soo jirtay in ka badan 10,000 oo sano. Muraayad maarta ah oo laga helay woqooyiga Ciraaq maanta waxay ku beegan tahay qiyaastii 8,700 BC.
6. 60% naxaas ah ayaa loo adeegsadaa fiilooyinka, 20% waxaa loo isticmaalaa saqafka iyo tuubbooyinka guryaha, halka 15% loo isticmaalo soo saarista mashiinnada warshadaha.
60% naxaas ah ayaa loo adeegsadaa fiilooyinka, 20% waxaa loo isticmaalaa saqafka iyo tuubbooyinka guryaha, halka 15% loo isticmaalo soo saarista mashiinnada warshadaha.
7. Copper sidoo kale waa wakiilka antimicrobial ee dabiiciga ah si loo joojiyo faafitaanka bakteeriyada, iyo maareynta albaabka naxaasta ah iyo gacan-qabsiga waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismooyinka dadweynaha.
8. In kabadan 400 oo aalado naxaas ah ayaa maanta la isticmaalayaa. Naxaasku waa wax ka kooban naxaas iyo zinc, halka naxaasuna ay tahay wax isku darsan oo naxaas ah, daasad, aluminium, silikoon, iyo beryllium.
9. Copper waa cunsur muhiim u ah nafaqada aadanaha. Macdantan ayaa muhiim u ah samaysanka unugyada dhiigga waxaana laga helaa cuntooyin badan sida khudaarta cagaaran, badarka oo dhan, baradhada iyo digirta. Haddii jirku leeyahay naxaas badan, wuxuu sababi karaa cagaarshow, dhiig-yaraan iyo shuban.
10. Copper ayaa mar la samayn jiray diinaar maantana waxaa lagu isticmaalaa euro. Euro wuxuu ka kooban yahay waxyaabo kala duwan oo naxaas ah sida Nordic gold, oo si gaar ah loogu sameeyay lacagta cusub. Waqti ka dib, naxaasku waxay dhaaftay dahab iyo qalin si ay u noqdaan birta inta badan loo isticmaalo shilimaadka.
Waqti ka dib, naxaasku waxay dhaaftay dahab iyo qalin si ay u noqdaan birta inta badan loo isticmaalo shilimaadka.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan helium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan lithium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Beryllium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Kaarboonka Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Nitrogen Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Ogsijiin Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Neon Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Fluorine Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan chromium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Zinc Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Gallium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Nickel Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cobalt Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Birta Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Manganese Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Vanadium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Titan Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Scandium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Kaalshiyamka Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan hydrogen - waa curiyaha ugu fudud miiska xilliyeed.